Sing - Malay - Bkk | GO & GO Travels
ရန်ကုန်- စင်္ကာပူ – မလေးရှား - ဘန်ကောက်
( ၁၃ရက် / ၁၂ ည ) အိပ်ခရီးစဉ် - ( ၁၅.၁ဝ.၁၅ – ၃၁.၁၂.၁၅ )
ီပေ ၁)ါ် ပြညောမေ –ှငညါစေသမန – င်္နညှါ့ကင ဃမကငျနွှသကမ (ီ)
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ချန်ဂီလေဆိပ်သို( ၁၅း၄၅ ) အချိန်တွင်ရောက်လျှင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီးတဆက်တည်း ဟိုတယ်သို့ဃ့နခု ငည ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ ညနေစာကိုနာမည်ကျော်ဃ့ငူင ဃမဘှေန်ေသသိ နြညကကိုသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီးနောက်စင်္ကာပူ၏ ညအလှကိုစင်္ကာပူဖြစ်တလျှောက်ကြာဘသအျွေငလနမ ဃမကငျနဖြင့်လည်ပတ်ရန်ှငညါစေသမန ပြ ငြါ့အ + “ င်္နညှါ့ကငွှသကမ “ ကိုစီစဉ်ထားသောကြောင့်ပျော်ပျော်ပါးပါးလည်ပတ်ကြပါမည်။ စင်္ကာပူတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်တနေ့တာလည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ကိုနံနက် (ဝ၉းဝဝ)တွင်စတင်ပါမည်။ ယနေတွင်ပထမဦးဆုံီးငောသညှိုညိကျအမပ ရံမေဘသကမာမေအများသို့ပျေိာပျော်ပါးပါး ဈေးဝယ်လည် ပတ်ကြည့်ရှုကြပြီး နောက်၊ နာမည်ကျော့်ညငလနမျှေူအကိငသ (ှုညခူကိနါ်ေူါောနျယ ၇ အ့နာန စမေု ရ ၂၄ မငိနျ )သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ (ြူခေု ဥကအိအေနါ် နြနိ အသ သမိနမိအေနိ အငခုနအျ ငညေိလညေခန – သြည မန်ကညိဘေူန) (သစနညငညါ့ သကမျ ၁ဝော -၇ စာ) (ူကညခှု့ညျငိန့ ညငလနမျှေူအကိငသျ ( နြျေူ ခသကစသည ၁ဝ $ ။ စထေ ).့ ညငလနမျှေူအကိငသ မှအပြန်ညနေစာကိုဗမခ့နျွနျအကေမညေအတွင်ဘူဖေးသုံးဆောင်ပါမည်။ ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နာမည်ကျော်ဆန်တိုဆာကျွန်းရှိလှပသောရေပန်းအကများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ပင်လယ်၏တေးသံသာ (ှသညါ သ် အ့နျနေ)ဟု ထင်ရှားသွေျှာငညျါ သ်ွှငာနဟိကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ဟိုတယ်သို့ပြန်၍တနေ့တာလည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ပါမည်။စင်္ကာပူတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၏ လှပသောငှက်ဥယျဉ်တစ်ခုဖြစအမျိုးမျိုးသောငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ရှိသော ၊ အာရှတွင်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပြီး၊ ငှက်အရေအတွက်အားဖြင့် ၅ဝဝဝ ကျော်ရှိသေဲာကမသညါ ငြမိ ဏမေု ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ပြီးနောက်နေ့လည်စာကိုကိုရီးယားဘာဘီကျူ့ဘူဖေးကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နာမည်ကျော်အော့ချက်လမ်းမတွင်ပျော်ပျော် ပါးပါးဈေးဝယ်ပါမည်။ ပြီးနောက်ွမေိနည ဘပ အ့န ဘပျေ ညေိ ခူသကိ င်္သမနျအ သမ င်္ူသတနမီသာနသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာကို“ွှ့န နျြအှငညါစေသမန ဃ့ငခုနညျွငခနံသကျန “ “ တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်ဟိုတယ်သို့ပြန်၍တနေ့တာလည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ပါမည်။စင်္ကာပူတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၄)ါ်ှငညါစေသမန –ဲသ့သမနမြေ့က -ြေူခေခေ –ဘပ နထစမနျ ဘကျ (ြ။ူ။ီ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုစားသုံးပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကာ ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုလုပ်ပေးပြီးနောက်၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်သို့ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ မိမိတို့သည်မလေးရှားနိုင်ငံ၏မြို့တစ်ခုဖြစ်သောမက်လက္ကာမြို့သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ မက်လကာသို့နယ်စပ်ဖြတ်သွေှာသကမ ကျြများဖြင့်သွားပါမည်။ (ကားမောင်းချိန် ၆ နာရီ)ခန့်ကြာပါမည်။ လမ်းခရီးတွင်နယ်စပ်လဝက ဝင်ရန်နှင့်ဃကျအသွာအေနဖြတ်ရန် (၂) ကြိမ်ဆင်းရပါမည်။ စင်္ကာပူနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံနယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော ဂျဟိုးဘာရူဂိတ်သို့ရောက်လျှင်၊ မလေးရှားဘက်မှမိမိတို့ ၏ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ နေ့လည်စာစားသုံးပြီးနောက်တဆက်တည်း မလေးရှားနိုင်ငံ၏ မြိုတော်တစ်ခုဖြစ်သြောေူခေခေ ဃငအပ သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာဥိူ င်္သမနျအယ ဃ့နညါံသသညွှနာစူနယ ဗညအဆကနှအမနနအယ ကြုငအ ဃ့ငညယှေ. ဏကွေျူနာငေညများကိုလည်ပတ်ပြီးနောက၊်ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။မက်လက္ကာမြို့တွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၅)ါ်ြေူခေခေ –ုကေူေူကာစကမ –ွနညအငညါံငါူ့ညေိ (ြ။ူ။ီ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုစားသုံးပြီးနောက်၊ လေးရှားနိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသော ကာစီနိုကစားဝိုင်းဖြစ်သည့်ွနညအငညါံငါူ့ညျေိသို့ထွက်ခွါပါမည်။ွနညအငညါံငါူ့ညျေိရှိ ကာစီနိုကစားဝိုင်းများ၊ွှ့နာန ဏမေုဥယျာဉ်တွင်မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာကစားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသည်။ွနညအငညါံငါူ့ညျေိတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၆)ါ်ွနညအငညါံငါူ့ညေိ –ုကေူေူကာစကမ (ြ။ူ။ီ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုစားသုံးပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ လမ်းတွင်နာမည်ကျော်ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားကျောင်းဖြစ်သော၊ တောင်ပေါ်ရှိဘတု့ကေ့ကို ဝင်ရောက်လည်ပတ်လေ့လာပြီးနောက်နေ့လည်စာကိုသုံးဆောင်ပြီး၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏မြို့တော်ကွာလာလမ်ပူမြို့ ကိုစတင်လည်ပတ်ရာတွင်၊ ပထမဦးစွာဃငအပွှသကမအနေဖြင့်-ုငည္လျါ ဏေူခေနယွှ့နငညံသကွှနာစူနယ ဏမေူငောနညအ့ သကျနယ အြေငသညေူ ကျြနကာယှုညိနစနညိနညခနှဆကမေနယ အြေငသညေူ သျြဆကန.များကိုလေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ပြီးနောက်နာမည်ကျော်ုဃဃွှတငညွှသတနမတွင် ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ကွာလာလမ်ပူတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၇)ါ်ုကေူေူကာစကမ -ဏကအမေပြေေ နြတ ဃငအပ -ညြေါုသု ဘပ်ူငါ့အ (ြ။ူ။ီ )
(ု –ှငည –ြု ) ဘပဲနအျအမေ ( ၁၉ါ်၎ဝ -၁၂ါ်၂ဝ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာကိုစားသုံးပြီးနောက်မလေးရှားနိုင်ငံ၏မြို့သစ်ဖြစ်သောပူထရာဂျာဗားမြို့သစ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက်နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။မလေးရှားလေဆိပ်မှ ည ၁၉း၎ဝ အချိန်တွင်ပျံသန်းထွက်ခွါပြီး၊ ဘန်ကောက်မြို့လေဆိပ်သို့( ၁၂း၂ဝ ) တွင်ရောက်ပါမည်။ ဘန်ကောက်သို့ရောက်လျှင်မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ကာ ဝင်ရောက်ခွင့်လုပ်ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
ီပေ ၈)ါ်ညြေါုသု – နာနမေိူ ကြိ့ေ –ီမနွေျှာသမိူ (ြ။ူ။ီ )
နာမည်ကျော်မြကျောက်ဖြင့်ထုဆစ်ထားသောမြဘုရားနှင့်မြဘုရားသီတင်းသုံးရာနေရာဘုရင့်နန်းတော်ကိုသွားရောက်လေ့လာဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ၄င်းနောက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအိပ်မက်ကမ္ဘီာမနွေျှာသမိူသို့ဧည့်လမ်းညွှန်မှလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ (ီမနွေျှာသမိူ) ထဲတွင်နေ့လည်စာဘူဖေးကိုအရသာရှိရှိသုံးဆောင်ပြီး၊ လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်၊ ကြည့်ရှု့ရင်း အမျိုးမျိုးသောခေတ်မီကစားကွင်းများတွင်ကစားနိုင်၊ အပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။ညနေပိုင်းတွင် ဧည့်လမ်းညွန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး ဏူအေငညကှာ့သစစငညါြေူသို့ပို့ဆောင်ပေး ပါမည်။ ဏူအေငညကှာ့သစစငညါြေူတွင်ဈေးဝယ်ရင်း ညနေစာကိုပါသုံးဆောင်ပါမည်။ ဘန်ကောက်မြို့တွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၉)ါ် ညြေါုသု – ဏအေအပေေ နြခေ့ (ြ ။ူ။ီ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ဧည့်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နံနက် (ဝ၈းဝဝ) အချိန်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ တဆက်တည်းနာမည်ကျော်အရှေ့တိုင်းဟာဝိုင်ရီဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်သော၊ ဘန်ကောက်မြို့မှနှစ်နာရီခန့်ကားဖြင့်သွားရသည့်ပတ္တရားကမ်းခြေသို့ထွက်ခွာပါမည်။ ပတ္တရားသို့ရောက်လျှင်၊ နွန်နပန်းဥယျဉ်တွင်နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး၊ ဆင်လိမ္မာပြပွဲနှင့်ထိုင်းရိုးရာကပွဲများကိုကြည့်ရှု့ပါမည်။ ¤င်းနောက်ပတ္တရားကမ်းခြေတွင်ရေကစားခြင်း၊ အနားယူခြင်းများ ကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးလျှင်နာမည်ကျော်ျွှေူုငညှါအမနနအ ကိုလည်ပတ်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ပတ္တရားတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၁ဝ)ါ်ဏအေအပေေ – ဃသမှေျူုညေိ (ြ ။ူ။ီ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နံနက် (ဝ၉းဝဝ) အချိန်တွင်ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ လှပချစ်စရာကောင်းသောဃသမှေျူုညေိသို့ဏကဘူငခ င်္နမမပ သြအေဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ရေကူးခြင်း၊ ရေငုတ်ခြင်း၊ ရွက်လှေစီးခြင်း၊ ရေကစားခြင်းစသည်ဖြင့်မိမိစိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာအနားယူ၊ အပမ်းဖြေနိုင်ပါသည်။ နေ့လည်စှာနေ င်္သသိျြှ ကိုဃသမှေျူုညေိတွင်သုံးဆောင်ကြပါမည်။ မွှန်းလွှဲပိုင်းတွင်ဃသမှေျူုညေိမှပတ်တရားသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သောငြညသျဏေအေအပေကေိုကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ပြီးနောက်ညစာကိုသုံး ဆောင်ပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက် အနား ယူကြပါမည်။ ပတ္တရားတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၁၁)ါ်ဏအေအပေေ – ညြေါုသု (ြ ။ူ။ီ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်း သှောမငမခေ့ွှေငါနမ ဇသသ ရ ငြညငှငောကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ နေ့လည်စာဘူဖေးသုံးဆောင်ပြီး၊ ဘန်ကောက်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ လမ်းတွင်ဘုရင့်သားတော် မဟာဗာဂျီယာလောင်ကွန်တည်ထားသောလေဆာဘုရားကို ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ပြီး၊ ဘန်ကောက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ ဘန်ကောက်ရောက်လျှင်ဘန်ကောက်မြို့ တော်ခရီးစဉ် ( ညြေါုသု ဃငအပွှသကမ )ကိုစတင်လည်ပတ်ပါမည်။ ခေတ်မီတိုးတက်ပြီး စည်ကားနေသော၊ ဘန်ကောက်မြို့ တော်ကိုကားဖြင့်လှည်လည်လည်ပတ်ရာတွင်၊ အဓိဌာန်ဆုတောင်း ပြည့်သည်ဟုနာမည်ကြီးသော ဧရာဝန် ဘိုးဘိုးကြီးရှိရာနတ်ကွန်းတွင်အမွှေးတိုင်၊ပန်း၊ ဖယောင်းတိုင်များဖြင့်ပူဇော်ပြီး ဆူတောင်းနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနောက်ွှမေိနျွှသမိူ ဃနညအနမ ကို လည်ပတ်ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ညနေစာကိုညြေါုသုမြို့ ၏ အမြင့်ဆုံးတာဝါဖြစ်သော ငြေ့ သမှုပ ၏ ၇၅ ထပ်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ ၏လှပသောညရှုခင်းများကိုဘူဖေး သုံးဆောင်ရန်စီစဉ်ပေး ထားပါသည်။ဘန်ကောက်မြို့ တွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၁၂)ါ်ညြေါုသု – ဗပကုအေိေ – ညြေါုသု (ြ ။ူ။ီ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ ၃ နာရီခန့်ကားဖြင့်မောင်း သွားရသောထိုင်းမြို့တော်ဟောင်း အယုဒ္ဓယမြို့သို့သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာရန်ထွက်ခွါပါမည်။ အယုဒ္ဓယမြို့သို့ရောက်လျှင်တဆက်တည်း ဘန်ပအင်းနန်းတော် ( ရာမဘုရင်၅ ၏ နွေရာသီနန်းတော် )၊ျွှအေ့ငေ ဃ့ငေ သြညါုသူတို့ကိုစတင်လေ့လာလည်ပတ်ပြီးနောက်နေ့လည်စာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်ပိုင်းလည်ပတ်မှုအနေဖြင့်ျွှအေဏမျေမငျညေစ့နခ့ယ ဗညခငနညအ ဃငအပ သ် ဗပကအ့ပေမျေားကိုထပ်မံလည်ပတ်လေ့လာပြီးနောက်၊ အယုဒ္ဓယမြို့မှပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ဘန်ကောက်ရောက်လျှင်နာမည်ကျော်ြု နှင့်ှငော ဏမေေါသညတို့တွင်ပျော်ပျော်ပါးပါး ဈေးဝယ်ကြ ပါမည်။ ညနေစာကိုထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွင်ဧည့်ခံပါမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ဝင်ရောက်အိပ်စက် အနားယူပါမည်။ ဘန်ကောက်တွင်ညအိပ်ပါမည်။
ီပေ ၁၃)ါ်ညြေါုသု –ှေ်မေငျွှသမိူ –ီနစမေအကမန (ြ ။ူ။-)
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နံနက် ( ဝ၉း၃ဝ ) ခန့်တွင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ှေ်မေငျွှသမိူနှင့် မြေငညန ဏမေု သို့ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့လည်စာကှိုေ်မေငျွှသမိူထဲတွင်ဘူဖေးသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဏမေုထဲတွင်ပျော်ရွှင်စွာအနားယူခြင်း၊ ဆောကစားခြင်း၊ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အမှတ် တရဓါတ်ပုံများရိုက်ခြင်းအစရှိသည်များပြီး နောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ည ( ၁၉း၁၅ ) အချိန်တွင်ြဥု ဗငမဖြင့်ဘန်ကောက်မှရန်ကုန်မြိုသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Tour cost per person by US$ ( Validity : 1stMay – 31stDec 2015 )
Ygn – Sin – Mal – Bkk ( 13 Ds/12 Ns )
We will use flight : Jet Star and NOK Air
Visa fee and visa service ( Not online visa )
International air ticket ( Ygn – Sin/ KL – Sin - Bkk/ Bkk- Ygn )
Myanmar tour leader ( vlOD;a& 10 OD;rSpjyD;jrefrmwdk;vD'gyg0ifygrnf/ )
3* Hotel accommodation (Twin/Triple Sharing) with breakfast
Express bus ticket for Singapore – Malaysia
Cable car ticket for Genting High land
One bottle Mineral water per day per person
Porter age one lag for hotel in / out
Meals as not specific program
If u want to apply the on line visa, we will collect 48 USD per person, but we can’t grantee for your visa grant or not and how long will be visa grant.
Above price will be add special period extra charges ( X’mas, New year … etc )